5-ta ugu sareysa ee WordPress Dropshipping Plugins | BehMaster
Bogga ugu weyn/WordPress/5ta ugu sareysa ee WordPress Dropshipping Plugins
5ta ugu sareysa ee WordPress Dropshipping Plugins
Bilaabida ganacsiga daadinta waxay u ekaan kartaa mid culus marka hore. Marka laga reebo soo saarista alaabta si aad u iibiso, waa inaad sidoo kale ka fikirtaa waxa ka galaya abuurista dukaanka farsamada si aad u soo bandhigto.
Liiska waxaa ku jiri doona waxyaabo badan, laakiin qoraalkan, waxaan diirada saari doonaa 5 plugins oo si weyn loo isticmaalo oo ka dhigi doona shaqada mid sahlan oo kugu habboon.
Waxaan ka hadli doonaa:
Maareeyaha Hubinta ee WooCommerce
Plugin kasta oo liiska ku jira, waxaanu dabooli doonaa:
Maxaa plugin sameeyo
Inta ay ku kacayso
Waa maxay sifooyinka aad heli doonto
Haddi yoolkaagu yahay inaad hesho plugin ka caawin doonta automation-ka daadinta ee ku habboon baahiyahaaga ganacsi, qoraalkan adigaa leh.
Haddii aad diyaar u tahay, aan bilowno.
Bilaabida Ganacsiga Hoos-u-dhaca
Markaad ka fikirto inaad bilowdo ganacsi daad-qaadid, waxay u badan tahay inaad horeba u lahaan doontaa fikrad waxaad rabto inaad iibiso. Welwelka ugu weyn ee soo socda ayaa noqon doona halka laga heli karo alaab-qeybiyeyaal iyo in la dhiso dukaankaaga casriga ah.
WordPress ayaa lagu doodi karaa inuu yahay mid ka mid ah nidaamyada maaraynta nuxurka caanka ah, haddaysan ahayn kan ugu badan, warshadaha. Haddii aad tan u tixgelinayso CMS-gaaga, waxa fiican inaad ogaato faraqa, faa'iidooyinka, iyo khasaaraha WordPress ka hor intaanad hore u socon.
WordPress wuxuu ka shaqeeyaa ku dhawaad ​​dhammaan warshadaha, laakiin haddii aad rabto in aad leedahay nidaamka maamulka content si gaar ah loogu talagalay warshadaha aadka u farsamo sida shirkadaha sharciga, waxaad ka heli doontaa dhufto ee ku habboon baahidaada si ka wanaagsan.
Marka lagu daro doorashada waxa CMS loo isticmaalo waxay timaaddaa xulashada adeegyada martigelinta ee saxda ah iyo bixiyaha amniga shabakadda sida Kaspersky iyo McAfee si loo hubiyo in hawlgalladaada daadinta ay si habsami leh oo badbaado leh u socdaan. Waxa ugu dambeeya ee aad rabto inaad dhacdo waa inaad soo bandhigto macluumaadka xasaasiga ah ee hackers-ka.
Ciyaartu kuma dhamaato. Kadib samaynta koontada WordPress, dhisidda dukaankaaga daadinta hadda waxay kuxirantahay samaynta doorashooyin badan - doorashada mawduuca, barashada bogga wax soo saarka ugu fiican hababka ugu fiican, xulashada qalabyada si otomaatig ah u sameeya hababka, iyo ka dib software maaraynta socodka shaqada, iyo xitaa falanqaynta jaantusyada socodka si waxqabadka iibka cinwaanka.
Haddii aadan hubin wax kasta oo aad u baahan tahay inaad tixgeliso marka aad bilaabayso ganacsiga daadinta, waxaad ku qaadan kartaa koorso khadka ah. Labada ikhtiyaar ee ugu fiican ee aad u leedahay koorsooyinka khadka tooska ah waa Skillshare iyo Udemy.
Oo haddii aad dareento, ka shaqaynta agagaarka WordPress waa adag tahay, waxaad dooran kartaa inaad kireysato horumariye si uu kuugu sameeyo qaadista culus.
Ku shaqaynta wax kasta oo ku jira meheraddaada gacanta, laga bilaabo alaab-qeybiyeyaasha, ka baaraandegidda hubinta, ilaa hubinta alaabada ayaa buuxin doonta maalintaada.
Wax yar ka dib markaad bilowdo hawlahaaga daadinta, waxaad ogaan doontaa inaad u baahan tahay qalab iswada iyo software automation-ka mashruuca si aad waddo ugu samayso waxyaabaha kale ee muhiimka ah ee u baahan dareenkaaga.
Waa kan halka ay soo galaan plugins-ka dropshipping
Waa maxay Plugins Dropshipping?
Plugins Dropshipping waa aalado ku dara shaqo gaar ah CMS sida WordPress. Plugin ku yaal goobta daadinta ayaa kaa caawin kara inaad hesho alaab, la socoshada dalabaadka, fulinta amarada, hirgalinta qiimo dhimis, iyo wax badan oo kale. Nidaam kasta oo lagu daro WordPress oo otomaatig u ah hababka daadinta waa plugin.
Sida ecommerceCEO, xalka iibinta Amazon wuxuu dhigayaa, "tartanka goobta ecommerce waa mid daran", waa inaad heshaa alaab, oofiya amarrada, bixiso qiimo dhimis waqtiga ugu dhaqsaha badan ee suurtogalka ah si ganacsigaagu uu gees uga dhigo tartanka, plugins-yada ayaa bixiya caawin weyn.
Ka dib markii aan samaynay cilmi-baaris qoto dheer, waxaan ogaanay 5 ka mid ah kuwa aadka loo raadsado ee WordPress plugins dropshippers isticmaalo. Mid kasta oo iyaga ka mid ah ayaan si dhow kuu eegaynaa si aad u go'aansato midka ugu fiican ganacsigaaga.
Aan ku bilowno AliDropship.
Qalabka AliDropship waa qalab isku dhafan oo kaa caawinaya inaad alaab ka soo dejiso AliExpress hal gujis.
Qalabkani waxa uu leeyahay lacag hal mar ah oo ah $89. Tani, waxaad heleysaa plugin-ka caadiga ah ee WordPress oo waxaad sidoo kale heleysaa plugin loogu talagalay WooCommerce.
Astaamaha AliDropship waxaa loo kala qaybiyay 4 kooxood: automation, customization, marketing, and management.
Raadinta iyo Soo dejinta - waxay kuu ogolaaneysaa inaad ka raadiso alaabta AliExpress adoo isticmaalaya sifooyin isku dhafan ka dibna ku dara goobtaada
Cusboonaysiinta tooska ah - waxay kaa caawinaysaa in xogta degelkaaga ay la socoto taariikhda AliExpress
Sicirka Automation - qaacido calaamadeyn ah oo dabaqa xeerarka qiimaha si loo kaydiyo alaabta
Fulin Amarka Toos ah - waxay ogolaataa xaqiijinta dalabka tooska ah ee AliExpress iyadoo la adeegsanayo badhanka "dalabka".
Shaandheynta dhoofinta ePacket - waxay u ogolaataa macaamiisha si degdeg ah oo bilaash ah
Dabagalka Amarka Auto- wuxuu la socdaa dalabka cusboonaysiinta wuxuuna si toos ah u soo diraa iimaylka xaqiijinta macaamiisha
Mawduucyada lagu dhex dhisay - ayaa mar hore lahaa mawduucyo si xirfadaysan loo qaabeeyey si aad si dhakhso leh u dejiso dukaankaaga
Habaynta Alaabta - waxay kuu ogolaanaysaa inaad ku darto shay, wax ka beddesho cinwaanada alaabta, sharaxaada, sawirada, kala duwanaanshaha, iyo qiimaha wakhti kasta
Alaabooyinka aan xadidneyn - waxay kuu ogolaaneysaa inaad iibiso inta alaab ee aad rabto dukaankaaga
Kala duwanaanshiyaha Alaabta - waxay bixisaa habayn toos ah oo kala duwanaansho ah oo loogu talagalay walxaha, midabada, cabbirka, iyo in ka badan
Taageerada WooCommerce - waxay kuu ogolaaneysaa inaad gasho mawduucyada Woo haddii aad isticmaasho nooca WooCommerce ee plugin
Tafatiraha Sawirka ee gudaha ku jira - wuxuu kuu ogolaanayaa inaad isbedel ku sameyso sawirada alaabta ka hor intaadan ku darin dukaankaaga
Kuubannada Dhimista - waxay kuu oggolaanaysaa inaad socodsiiso xayaysiisyada sida boqolkiiba dhimista, doollarka dhimista, dhoofinta bilaashka ah, iyo in ka badan
Dib u eegisyada Alaabta - waxay ka soo dejisaa dib u eegista alaabta AliExpress bogga alaabtaada
SEO Product Tags – waxay wanaajisaa bogga wax soo saarka dukaankaaga si ay alaabadu uga soo muuqdaan natiijooyinka mashiinka raadinta, si kale haddii loo dhigo, adeegsiga ecommerce SEO ee isla'egta
Gaariga la dayacay – waxa uu ururiyaa ciwaanada iimaylka booqdayaasha aan wax iibsi ah samayn si aad dib uga hawl gasho si aad u soo ceshato iibka
Liisaska iimaylka – ururiya macluumaadka xidhiidhka ee booqdayaasha aan dhamaystirin wax iibsiga
In kasta oo suuq-geynta iimaylka uu yahay hab si weyn loo yaqaan oo dib-u-hawlgelinta macaamiisha suurtagalka ah, tan iyo 81% dadka waaweyni waxay leeyihiin taleefan casriga ah, suuqgeynta SMS sidoo kale waa istiraatiijiyad wanaagsan oo lagu dhiirado.
Tirakoobka tooska ah - wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku xidhid plugin Google Analytics si aad u hesho xogta taraafikada
Is dhexgalka Kadinka Lacagta - wuxuu u oggolaanayaa taageerada 2CO, Stripe, Paypal, PayU, iyo kuwa kale.
Maareynta Alaabta – waxay si dhow ula socotaa agabka alaabada si aad u hakiso iibinta kuwa dhammaaday. Mid ka mid ah tusaale wanaagsan oo tan ah waa 3Wishes halkaas oo ikhtiyaarrada kala duwanaanshuhu ay si toos ah u naafo yihiin marka cabbirku aanu awoodin iibsashada.
Xigasho: 3 rabitaan
All-in-one Dashboard - wuxuu kuu oggolaanayaa inaad aragto oo aad maamusho taraafikada, dalabaadka, iibinta hal bog
Nidaamka Lacag-celinta - wuxuu ku siinayaa komishanka gunnada 8% dakhliga iibka ee badeecad kasta oo la iibiyo
Cusbooneysiinta iyo Taageerada bilaashka ah - waxay ku siinayaan cusboonaysiinta iyo taageerada iibka kadib
Sidee loo xiraa
Iibso plugin oo hel magac domain
Ku xidh bixiyaha martigelinta waxqabadka sare. Ama bixiye kasta oo martigelinaya oo taageera PHP 7.1 ama ka sareeya oo leh ionCube Loader ka shaqeeya serverka.
Ku rakib WordPress cPanel kaaga.
Ku rakib AliDropship Plugin WordPress. Tag Plugins tab, dhagsii add new, ka dib soo gal plugin ka dibna dhagsii install hadda.
Daar mawduuca la doortay oo geli furaha shatiga - koodka aad hesho markaad dhamaystirto iibka.
Maskaxda ku hay in hal fure shati uu ansax u yahay hal magac domain ama degel. Laakin sidoo kale waxaad dami kartaa shatiga dukaankaaga haddii aad doorato inaad u isticmaasho dukaan kale.
Marka la sameeyo dhammaan tallaabooyinka, waxaad hadda bilaabi kartaa isticmaalka plugin.
Taariikh gaaban WooCommerce, waa il furan oo ku taal WordPress. Waa plugin kuu ogolaanaya inaad ka dhisto dukaanka eCommerce gudaha WordPress.
Maareeyaha Checkout ee WooCommerce waa plugin loogu talagalay in uu kula shaqeeyo plugin WooCommerce ee guud. Maareeyaha Checkout wuxuu caawiyaa ku darista, tirtirka, oo dib u dalbeeyo goobaha biilasha ee bogga hubinta.
Waxaa jira nooc bilaash ah oo lagu bilaabo. Si aad u hesho astaamo dheeri ah, waxaad dooran kartaa mid ka mid ah 3da xirmo ee qiimaha:
Shakhsi ahaan $19
Xigasho: Maareeyaha Hubinta ee WooCommerce
Waxka bedelka Goobta hubinta
Waxay kuu ogolaanaysaa inaad ku darto ama ka saarto biilasha iyo qaybaha goobta rarida. Waxa kale oo ay kuu ogolaanaysaa inaad ku darto goobo badan foomka hubinta.
Ku dar khidmadaha hubinta cusub
Aynu ku darno boqolleyda iyo khidmadaha go'an ee hubinta labadaba ikhtiyaarka keli ah iyo goobaha kala-doorashada badan.
Wax ka beddel Goobaha Muhiimka ah
Ku oggolow inaad bixiso qiyamka cusub ee meelaha xudunta u ah sida nooca, magacyada, fasalka, ku meeleeyaha qaybaha rarida iyo biilasha.
Goobaha Shuruuda ah
Si loo horumariyo waayo-aragnimada isticmaale, noocyada goobta waalidka waa la ogaadaa waxayna kuu oggolaanayaan inaad doorato qiyamka iyadoo lagu saleynayo xulashooyinka la bixiyay.
Ku ogolanaya in aad yarayso foomka jeeg-bixinta adiga oo meesha ka saaraya ama curyaaminaya meelaha aan loo baahnayn.
Haddii aad rabto inaad ogaato meelaha lagama maarmaanka u ah iyo kuwa aan loo baahnayn, tusaale fiican oo la eego waa foomka ka gaabsanaanshaha bogga Aura. Waxay kaliya u baahan tahay magacaaga, iimaylka, eraygaaga sirta ah, iyo xaqiijinta eraygaaga sirta ah, markaa waad fiicantahay inaad tagto.
Xir, garaaca saadaasha CRM waa ka hufan yahay, kaliya waxay u baahan yihiin 3 shay: iimaylka, erayga sirta ah, iyo lambarka taleefoonka, ama qaar kaliya oo u baahan magacaga koowaad, magaca dhexe, iyo magaca qoyska, ma jirto macluumaad kale oo xasaasi ah.
Waxay u ogolaataa maamulaha dukaanka inuu maamulo faylalka adeegsaduhu soo geliyo dashboardka maamulka wuxuuna sidoo kale u ogolaadaa isticmaalayaasha inay maamulaan faylasha shaqsi ahaan loo soo raray bogga "Akoonkayga".
Muuji Kastamka Siday u kala horeeyaan
Waxay u ogolaataa isticmaalayaasha inay arkaan tafaasiisha hore loogu soo galiyay foomka dalabka kadib markay xaqiijiyaan dalabka.
Waxay ku shaandhaysaa meelaha qaabka loo dalbado ee lagu daro iimaylka loo soo diray macaamiisha ka dib iibsi si loo xaqiijiyo iibka mid gaar ah.
Soo deji faylka woocommerce-checkout-manager-pro.zip.
Ka gal guddiga maamulka WordPress ee mysite.com/wp-admin/.
Tag Plugins tab, dhagsii add new, ka dibna soo gal plugin.
Guji dooro faylka oo ka raadi faylka woocommerce-checkout-manager-pro.zip.
Dropified waa qalab kale oo otomaatig u ah plugin WooCommerce. Waxay kuu fududaynaysaa soo dejinta badeecadaha iyo cusboonaysiinta qiimaha dukaankaaga.
Xigasho: La tuuray
Waxa kale oo ay kuu ogolaanaysaa inaad beddesho macluumaadka alaabta adigoo weli haysanaya nooca asalka ah haddii aad u baahan tahay mar kale tixraacyada qoraal-qorista haddii aad rabto inaad xirfadda u barato.
Waxa kale oo aad qaadan kartaa fasal Ingiriisi ganacsi si aad kor ugu qaaddo ereyada ganacsigaaga ama aad u akhrido agab waxbarasho oo qoraal ah. Mid ka mid ah meelaha ugu wanaagsan ee ilaha waxbarasho ee aad ka heli karto agab waxbarasho oo bilaash ah waa StuDocu.
Dropified wuxuu leeyahay laba qorshe oo qiimeed:
Qorshaha ku dhis $228/sanadkii
Qorshaha Kobaca ee $564/sanadkii
Si Dhakhso Ah Ugu Daraysa Alaabta
Oggolow raritaanka alaabta degdega ah ee Alibaba, eBay, iyo AliExpress.
Meelaynta Dalabka Tooska ah
Waxay leedahay aalad cilmi baaris AliExtractor oo sahlaysa in la helo alaab faa'iido leh.
Soo dejinta alaabta dib u eegista
Si fudud uga soo dejisa faallooyinka alaabta AliExpress dukaankaaga.
Haddii aad rabto inaad sida ugu fiican uga faa'iideysato dib u eegista, hal dariiqo oo wanaagsan oo lagu caawin karo booqdayaasha inay beddelaan ayaa ah inaad ku darto qiimeyn muuqaal ah si aad u siiso dulmar degdeg ah badeecada adigoon akhrin marag-furyo dhaadheer.
Tusaalaha ugu wanaagsan ee tan waa sanduuqyada dib u eegista ee ku yaal Hagaha Iibsadayaasha Feejignaanta Caafimaadka.
Xigasho: Hagaha Iibsadayaasha Feejignaanta Caafimaadka
Leh dashboard faa'iido leh kaas oo la socda lacagta soo galaysa iyo ka soo baxaysa dukaankaaga.
Ku rakib WooCommerce Plugin WordPress. Si fudud u guji tabka plugins-ka, ka bacdi ku dhufo add new, ka bacdi raadi plugins, ku qor “WooCommerce”, ka bacdi guji install hadda.
Bogagga Bakhaarrada La Tuuray dhagsii ku dar dukaanka si aad ugu xidhid WooCommerce akoonkaaga La Laajiyay.
Buuxi magaca dukaanka oo ku kaydi URL ka dibna dhagsii add store.
Gal koontadaada WooCommerce si aad u oggolaato isku xidhka labada plugins.
Waxay kuu ogolaanaysaa inaad soo dejiso 50,000 khubarada tafaariiqda ah ee gacanta lagu soo doortay iyo badeecooyinka ugu iibka badan dukaankaaga. Waxay kaa caawinaysaa inaad ku kalsoonaato tayada alaabta aad iibiso.
Waxaad ku bilaabi kartaa Dropship.me bilaash. Markaad qorsheyneyso inaad cabbirto meheraddaada daadinta, waxaad ka dooran kartaa saddex qorshe oo qiimeeyaal ah oo u hoggaansamaya tirada alaabada aad rabto inaad ku darto dukaankaaga.
50 badeeco ayaa lagu soo dejiyaa bilaash
100 badeeco ah oo lagu soo dejiyo $29
500 badeeco ah oo lagu soo dejiyo $119
1000 badeeco ah oo lagu soo dejiyo $199
Leh ururinta alaabta daadinta ee khabiirku soo xushay
U diyaar ah in la isticmaalo cinwaannada alaabta ee ay tafatireen xirfadlayaasha
Badeecada degdega ah
1-guji soo dejinta
Dib u eegista macaamiisha dhabta ah ee gacanta ku jirta si aad u isticmaasho dukaankaaga
Ma jiraan kharashyo soo noqnoqda oo qarsoodi ah bishii
Nooca bilaashka ah, iimayl u dir dropship.me/plugin/ si aad u hesho furaha API ee gaarka ah. Nooca qaaliga ah, u tag dukaanka si aad u soo qaadato xirmada doorashada oo aad ka baaraandegto amarka si aad u hesho furaha API.
Gudaha WordPress, u gudub tab plugins, dhagsii add new, ku qor "dropshipme" ee bar raadinta.
Marka la helo, dhagsii install, ka dibna riix activation.
Geli furaha API
Markaad dhamaystirto nidaamkan, waxaad isla markiiba heli doontaa 50-ka badeecad ee la soo dejiyo.
Maskaxda ku hay in sida AliDropship, furaha API kaliya lagu hawlgelin karo hal goob laakiin si ka duwan AliDropship, furaha API Dropship.me looma wareejin karo qayb kale. Sidoo kale, ku darida furaha API ee isla goobta kuma dari doonto 50 alaab oo dheeraad ah.
Waxay kuu ogolaataa inaad badeecadaha AliExpress ku soo dejiso dukaanka WooCommerce dhowr jeer oo keliya.
Sida Dropship.me, Ezusy waxa ay leedahay nooc bilaash ah iyo 3 qorshe oo qiimo leh:
Qorshaha aasaasiga ah ee $118.8/sanadkii
Qorshaha Pro ee $238.8/sanadkii
Qorshaha aan xadidnayn ee $358.8/sanadkii
Kala duwanaanshaha soo dejinta
Ku ogolanaysaa inaad si degdeg ah ugu shubto kala duwanaanta alaabta.
Oggolow 2-tallaabo calaamadaynta qiimaha alaabta ee dashboard-ka.
Waxka bedelka alaabta
Ku ogolanaya in aad habayso alaabta ka hor inta aanad u riixin dukaamadaada ku yaala dashboardka.
Fulin Amarka Toos ah
Hal-guji dalabkaagana waxaa lagu xaqiijiyay AliExpress.
Cusbooneysiinta otomaatiga ah ee Qiimaha iyo Alaabta
Waxay si toos ah u riixdaa alaabada AliExpress iyo cusboonaysiinta qiimaha dukaankaaga si aad u hakiso iibinta alaabada aan kaydka ku jirin.
Haddii aad ku jirto warshadaha cuntada, waxaad u baahan doontaa nidaam aad u taxaddar badan si aad isaga ilaaliso cawaaqibka sida kharribaadda. iNecta waa door hormuud u ah maaraynta agabka cuntada.
Ku Sifee Alaabta EPacket
Sida AliDropship, waxaad ku socodsiin kartaa si degdeg ah oo bilaash ah Ezusy. Waxay kaloo sameeyeen chrome plugin si ay kuu socodsiiyaan.
Iibso qorshaha Ezusy ee aad dooratay.
Soo rar faylka ezusy.zip tusaha /wp-content/plugins/
Riix tab plugins, guji ku dar cusub, ku qor "Ezusy" ee bar raadinta.
plugins dropshipping WordPress waa lama huraan haddii aad rabto alaab degdeg ah oo joogto ah oo la cusbooneysiiyay. Waxay u ogolaataa socodka wax kala iibsiga kaas oo faa'iido u leh adiga kaliya maaha laakiin sidoo kale macaamiishaada.
Plugins-yadan, waxaad si hufan u habayn kartaa habka wax iibsiga, dhammaadka macaamilka, waxaa jiri doona khibrad isticmaale oo wanaagsan - shay muhiim u ah kororka beddelka iyo dakhliga, laga jaray dhibka uu keeno adigoo wax walba gacanta ku samaynaya.
Ugu dambeyntii, haddii aad go'aansato inaad iibiso degelkaaga daadinta, waxaad u baahan tahay inaad ogaato sida loo qiimeeyo ganacsigaaga onlaynka ah si aad si wanaagsan uga faa'iidaysato iibka. Kadibna, waxaad u gudbi kartaa hawshaada soo socota ee daad-gureynta oo aad ka faa'iidaysan karto plugins-yada ka caawiyay ganacsigaaga inuu si habsami leh u socdo.
Wax kasta oo aad go'aansatid inaad ku samayso ganacsigaaga daadinta: sii wad, iibi, ama ku soo celi meel kale oo lagu shubo, haysashada qalabyada saxda ah ee otomatiga ah ayaa kaa caawin doona inaad si habsami leh u socodsiiso ganacsigaaga iyo ka sii muhiimsan, ka faa'iidayso lacagta ugu badan.
Go'aanso waxa plugins ay kuu shaqeeyaan hadda, si aad u bilaabi karto samaynta hababka daadintaada si degdeg ah oo sahlan, samaynta wakhti badan oo aad ku sameyso waxaad rabto - wakhti la qaadashada qoyska iyo ku raaxaysiga wakhtiga firaaqada.
Burkhard Berger waa aasaasihii awesomex™. Waxaad kula socon kartaa safarkiisa min 0 ilaa 100,000 booqde bishiiba www.awesomex.com Maqaalladiisa waxaa ka mid ah qaar ka mid ah xeeladaha jabsiga kobaca ugu wanaagsan iyo xeeladaha cabbiraadda dhijitaalka ah ee uu ka bartay guulihiisa iyo guuldarradiisa.
Sida loogu martiqaado isticmaalayaasha Android iyo Windows wac FaceTime ee iOS 15
Baro Sida Loo Wanaajiyo Qiimaha Beddelkaaga Freemium oo aad u xoojiso natiijooyinkaaga